Modernized Oriental Technique of Accurate Astrology (MOTAA): ပြည်သူချစ်သော အင်ဒီရာ (သို့မဟုတ်) ပရိဝတ္တန ယောဂ သုံးထပ်ကွမ်း ပိုင်ရှင် အမျိုးသမီး ၀န်ကြီးချုပ်
ပြည်သူချစ်သော အင်ဒီရာ (သို့မဟုတ်) ပရိဝတ္တန ယောဂ သုံးထပ်ကွမ်း ပိုင်ရှင် အမျိုးသမီး ၀န်ကြီးချုပ်
အိန္ဒိယ နိုင်ငံ၏ ချစ်သမီး အင်ဒီရာ၊ ပြည်သူတို့၏ အမိ သဘွယ် လေးစား ချစ်ခင်ခြင်း ခံရသော - အမျိုးသမီး ၀န်ကြီးချုပ် ဖြစ်လာမည့် အင်ဒီရာ ဂန္ဒီကို- အိန္ဒိယ နိုင်ငံ၊ အလာဟာဘတ် မြို့တွင်- ၁၉၁၇-ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၉-ရက်၊ ည ၁၁း ၁၁ - ၌ ဖခင် ဖြစ်သူ ဂျဝါဟလာ နေရူးနှင့် မိခင်ဖြစ်သူ ကာမလာ နေရူးတို့မှ မွေးဖွား သန့်စင်ခဲ့သည်။
အခြေခံ ပညာ အောင်မြင်ပြီးနောက် ၁၉၃၄-၃၅ ခုနှစ်တွင် အိန္ဒိယ စာဆိုတော်ကြီး ရာဘိန္ဒြာ နတ်သ်ဂိုး တည်ထောင်ခဲ့သော ကျောင်း တွင် ဆက်လက် ပညာ သင်ကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက် အင်္ဂလန် နိုင်ငံ၊ အောက်စ်ဖို့ဒ် တက္ကသိုလ် ၀င်ခွင့် စာမေးပွဲကို ဖြေဆို ခဲ့သော်လည်း - မအောင်မြင် သဖြင့် ၀င်ခွင့်မရခဲ့။ ၁၉၃၇-တွင်မှာ အောက်စ်ဖို့ဒ် တက္ကသိုလ်၊ ဆိုမာ ဗီလီး ကောလိပ်တွင် ပညာသင်ခွင့် ရခဲ့၏။ နောင်တွင် ခင်ပွန်းဖြစ်လာမည့် ဖာရိုးဇီ ဂန္ဒီနှင့် ဤကာလတွင်ပင် ဆုံတွေ့ခဲ့၏။ သို့နှင့်ပင် ၁၉၄၂-ခုနှစ်တွင် သူတို့ ၂-ဦး လက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။
၁၉၄၁-တွင် အိန္ဒိယသို့ ပြန်ရောက်ကတည်းက အိန္ဒိယ နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးတွင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၁၉၆၄-တွင် ဖခင်ဖြစ်သူ နေရူး ဆုံးပါးပြီးနောက် - အထက်လွှတ်တော် အမတ်တစ်ဦး ဖြစ်လာ၍၊ သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီး တာဝန်များ ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်။ အခြားသော ဘဏ္ဍာရေး ၀န်ကြီး တာဝန်၊ ပြည်ပရေးရာ ၀န်ကြီး တာဝန်များကို ဆက်လက် ထမ်းဆောင်ခဲ့၏။
၁၉၆၆ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၄ မှ ၁၉၇၇ မတ်လ ၂၄ အထိ ၀န်ကြီးချုပ် အဖြစ် ပထမ အကြိမ် သက်တမ်း တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ရ၏။ အိန္ဒိယ နိုင်ငံ၏ တတိယ မြောက် ၀န်ကြီး ဖြစ်ပြီး- ထိုအချိန်ကာလက အမျိုးသမီးများ အား - အိမ်ထောင်ရှင်မ အဖြစ်သာ သဘောထားသော အိန္ဒိယ တွင် ပထမဆုံးသော ၀န်ကြီးချုပ် ဖြစ်ခဲ့၏။
သို့သော်- နိုဝင်ဘာလ ၁၉၆၉ တွင် - ပါတီ၏ စည်းကမ်းများကို မလိုက်နာမှု ဖြင့် ထိုအချိန်က ကွန်ဂရက်ပါတီ ဥက္ကဌ ဖြစ်နေသူ အင်ဒီရာအား ကွန်ဂရက် ပါတီမှ ထုတ်ပယ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ အင်ဒီရာသည် ကွန်ဂရက် (အာရ်) Requisition ဆိုသော ပြိုင်ဘက် ပါတီကို တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြင့် ပါတီ ၂-ပိုင်းကွဲသွားသည်။ မူလ ကွန်ဂရက် ပါတီ ကော်မီတီမှ အဖွဲ့ဝင် ၇၀၅ ဦးမှ ၄၄၆ ဦးသည် အင်ဒီရာတည်ထောင်သော ကွန်ဂရက် ပါတီ အသစ် နယူး ကွန်ဂရက် ပါတီ သို့ ပြောင်းရွှေ.လာခဲ့သည်။
၁၉၈၀ ဇန်န၀ါရီလ တွင် အင်ဒီရာသည် ၀န်ကြီးချုပ် အဖြစ် ဒုတိယ အကြိမ် ပြန်လည် ရရှိခဲ့သည်။ သို့သော် ထက်မြက်သော သားငယ်ဖြစ်သူ ဆန်ဂျေးသည် တရားဝင် ၀န်ကြီး မဟုတ်သေးသော်လည်း တန်ခိုးပါဝါ အပြကောင်း ခဲ့သဖြင့် - အဆင့်မြင့် ၀န်ကြီးများ၊ ကက်ဘီနက် ၀န်ကြီးများစွာတို့- အင်ဒီရာ အနေဖြင့် မိမိတို့ မပျော်ပိုက်ကြောင်း သိစေရန် ဆန္ဒပြသည့် အနေဖြင့် ရာထူးများမှ နှုတ်ထွက်ခဲ့ ကြသည်။ သားငယ် ဆန်ဂျေး သည် ၁၉၈၀ ဇွန်လ ၂၃-ရက်တွင် လေယာဉ် ပျက်ကျပြီး ကွယ်လွန် ခဲ့သည်။
၁၉၈၄-ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၆-ရက်နေ့ တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပန်ဂျပ်ပြည်၊ ရွှေကျောင်း အရေး အခင်း ကိုင်တွယ်ပုံ နှင့် ပတ်သက်၍ မကျေနပ်သော သူမ၏ ဆစ်ခ် လူမျိုး ကိုယ်ရံတော် နှစ်ဦးမှ သူမအား ၁၉၈၄-ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၃၁-ရက်တွင် ပူးပေါင်း လုပ်ကြံခဲ့ကြ၏။
ဤသည်ကား အင်ဒီရာ ဘ၀ မှ အချက်အလက် အချို့ ဖြစ်၏။ အပြည့်အစုံကို http://en.wikipedia.org/wiki/Indira_Gandhi တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
ပရိဝတ္တယုဂ် နှင့် အင်ဒီရာ ဂန္ဒီ
ပြီးခဲ့သော ဆောင်းပါး တစ်ခု ဖြစ်သော- “ယုဂ် (သို့မဟုတ်) ကံကြမ္မာကို စစ်ဆေးသော ပုံသေနည်းများ။” ဆောင်းပါး တွင် ပရိဝတ္တယုဂ် အကြောင်းကို ရေးသား ဖေါ်ပြခဲ့ပါသည်။
ပရိဝတ္တန ယောဂ ကို အသေးစိတ် လေ့လာမည် ဆိုလျှင် အမျိုးအစားပေါင်း ၆၆ မျိုးအထိ ရှိပါသည်။
၄င်းတို့ကို အုပ်စု အနေဖြင့် ရိုးရိုးလေး ခွဲစိတ်သုံးသပ်မည် ဆိုပါက- အောက်ပါ အတိုင်း အုပ်စု သုံးမျိုးကို တွေ့ကြ ရပါမည်။
(၁) ကောင်းသော ဘာဝ အိမ်ရှင်များ အချင်းချင်း - အိမ်ဖလှယ် ရပ်တည်နေကြခြင်း။ ဥပမာ- တြိဂေါဏ အိမ်ရှင်များနှင့် ကိန်း အိမ်ရှင်များ။ (အကောင်းဆုံး အကျိုးပေးသော အနေအထား)
(၂) ကောင်းသော ဘာဝ အိမ်ရှင်များနှင့် မကောင်းသော ဘာဝ အိမ်ရှင်များ အိမ်ဖလှယ် ရပ်တည်နေကြခြင်း။ (ကောင်းကျိုး နှင့် ဆိုးကျိုးတို့ကို ယှဉ်တွဲပေးတတ်သော အမျိုးအစား အနေအထား)
(၃) ဒုဌာန ဘာဝ အိမ်ရှင် အချင်းချင်း အိမ်ဖလှယ် ရပ်တည်နေကြခြင်း၊ ရှင်းလင်းအောင် ဆိုရလျှင်- အချို့သော ပညာရှင်များ ပြောလေ့ရှိတတ်သည့် မကောင်းသော ဂြိုဟ်များ မကောင်းသော အတန့်တွင် နေလျှင်ကောင်းသည် ဆိုသော- တနည်းအားဖြင့် “၀ိပရိတ္တ ရာဇ ယောဂ” အနေဖြင့်- နှစ်ထပ်ကွမ်း ဖြစ်နေခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ မိုးတား MOTAA မူ အနေဖြင့် “၀ိပရိတ္တ ရာဇ ယောဂ” ကို အသိ အမှတ် မပြုပါ။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော်- ဂြိုဟ်ဆိုး တစ်လုံးသည် မိမိ အနေဖြင့် ပိုင်ဆိုင် ထားသော အိမ်တွင် ရပ်တည်ခြင်း မဟုတ်ပဲ- အခြား အတန့်ဘာဝ (အခြား ဒုဌာန ဘာဝပင် ဖြစ်လင့် ကစား) တစ်ခုခု၏ အလယ်မှတ် နှင့် နီးစပ်ပါက- ထိုဘာဝ အတန့်အား ဖျက်ဆီး သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ မိမိ အနေဖြင့် သခင် အဖြစ် ပိုင်ဆိုင်သော ဘာဝ ကိုမူ မဖျက်ဆီးပါ။
ပြီးခဲ့သော ဆောင်းပါးများ နှင့် သင်ခန်းစာများတွင် ထိုအချက်ကို ရှင်းပြထားချက်များ ပါဝင်ပါသည်။ (ကျမ်းမူများမှ တိုက်ရိုက် ယူသော အဆိုများ အရမူ - ထိုယောဂ ပိုင်ရှင်သည် အစပိုင်းတွင် အခက်အခဲ တို့ကို ရင်ဆိုင် ရသော်လည်း- အလွန်ကောင်းသော အကျိုးများ ပေးသည် ဟု ဆိုထားပါသည်။)
အိန္ဒိယ နိုင်ငံ၏ ၀န်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့သူ အင်ဒီရာ ဂန္ဒီ၏ ဇာတာတွင် အလွန်ထူးခြားသော အနေအထား ရှိပါသည်။
ထိုအချက်မှာ ပရိဝတ္တန ယောဂ (၃) ထပ်ကွမ်း ပါရှိနေခြင်း ဖြစ်ပါ၏။ အောက်တွင် ကြည့်လိုက်ပါ။
ပရိဝတ္တန ယောဂ အမှတ် (၁)။ (မဟာ ပရိဝတ္တန ယောဂ အမျိုးအစား-ဖြစ်သည်။)
လဂ်မှ ၇-တန့်ဘာဝ အိမ်ရှင် (သခင်မဟုတ်ပါ) ဖြစ်သော စနေသည် - လဂ်သခင် ဖြစ်သော တနင်္လာဂြိုဟ်နှင့် ပိုင်ဆိုင်ရာ ရာသီအိမ်ချင်း ဖလှယ်၍ ရပ်တည်နေကြခြင်း ဖြစ်၏။ တနည်းအားဖြင့်- ၇-တန့်ဘာဝ သည် ကိန်းအိမ်ဖြစ်ပြီး၊ ၁-တန့်ဘာဝသည် ကိန်းအိမ်လည်း ဖြစ်၊ တြိဂေါဏ လည်းအိမ်လည်း ဖြစ်သော အိမ်ဖြစ်သည်။
ကိန်းအိမ်ရှင် နှင့် တြိဂေါဏ အိမ်တို့ ဖလှယ်ချင်းကို ဗြို့ဟဇ်ဇာတက ပရာသျှရ ဟောရ သျှတ္တရ ကျမ်း၊ အခန်း ၃၄- ဂါထာ ၁-၁၇ တွင် အောက်ပါ အတိုင်း ဖေါ်ပြထားပါသည်။
If there be an exchange betweenaLord ofaKendra andaLord ofaKona, or ifaLord ofaKendra is yuti withaLord ofaKona inaKendra or inaKona, or ifaLord ofaKona is inaKendra, or vice versa, or if there happens to beafull Dṛṣṭi betweenaLord ofaKendra andaLord ofaKona, they causeaYoga. One born in suchaYoga will becomeaking and be famous.
အံသာ ကို မစစ်ဆေးသော သမားရိုးကျ စစ်ဆေးနည်းများ အရ ဆိုလျှင်- စနေသည် - တနင်္လာဂြိုဟ်နှင့် သမသတ် ရပ်တည်နေခြင်းဖြင့်- ၄င်းတို့ အချင်းချင်း မြင်နေသကဲ့ သို့ပင် ရှိနေသေး၏။
(ဤစစ်ဆေးချက်သည်- သမားရိုးကျ နက္ခတ်စစ်ဆေးသောမူ အရ ဖြစ်၍- မိုးတား MOTAA မူ မဟုတ်ပါ။ အံသာ အနေအထား ကွာဝေးခြင်းဖြင့်- သမသတ် တည်တိုင်း မမြင်သကဲ့သို့- ရာသီ တစ်ခုတည်း ကျတိုင်းလည်း မပူးပါ။ ထို့အပြင်- မိုးတား အနေဖြင့် ဂြိုဟ်တို့၏ စရိုက် သဘာဝ ကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် သခင် ဖြစ်သော ဘာဝ အရသာ ယူ၍- အိမ်ရှင် အနေဖြင့် မယူပါ။ ယခု အနေအထားတွင်- စနေကို ၈-တန့် သခင် အဖြစ်သာ ယူပါသည်။)
ပရိဝတ္တန ယောဂ အမှတ် (၂) (မဟာ ပရိဝတ္တန ယောဂ အမျိုးအစား-ဖြစ်သည်။)
လဂ်မှ ၅-တန့်ဘာဝ အိမ်ရှင် (သခင်မဟုတ်ပါ) ဖြစ်သော အင်္ဂါ သည် - ၂-တန့်ဘာဝ အိမ်ရှင်လည်းဖြစ် (သခင် လည်းဖြစ်သော) ဖြစ်သော တနင်္ဂနွေ ဂြိုဟ်နှင့် ပိုင်ဆိုင်ရာ ရာသီ အိမ်ချင်း ဖလှယ်၍ ရပ်တည် နေကြခြင်း ဖြစ်၏။
အံသာ ကို မစစ်ဆေးသော သမားရိုးကျ စစ်ဆေးနည်းများ အရ ဆိုလျှင်- အင်္ဂါသည် ၄-တန့်ဘာဝ ကို မြင်သည် ဆိုသောကြောင့် - အင်္ဂါမှ တနင်္ဂနွေကို မြင်နေသကဲ့သို့ ပင် ရှိနေသေး၏။ (မိုးတား MOTAA မူ မဟုတ်ပါ။ အံသာ အနေအထား ကွာဝေးခြင်းဖြင့်- သမသတ် တည်တိုင်း မမြင်သကဲ့သို့- ရာသီ တစ်ခုတည်း တည်နေတိုင်းလည်း မပူးပါ။ အင်္ဂါသည် - မိဿ ရာသီ ၁၀-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်သာ ဖြစ်ပါသည်။ )
ပရိဝတ္တန ယောဂ အမှတ် (၃) (တိံည ပရိဝတ္တန ယောဂ အမျိုးအစား-ဖြစ်သည်။)
လဂ်မှ ၆-တန့်ဘာဝ အိမ်ရှင်လည်းဖြစ် (သခင် လည်းဖြစ်သော) ဖြစ်သော ကြာသပတေး သည် - ၁၁-တန့်ဘာဝ အိမ်ရှင် ဖြစ်သော (သခင် မဟုတ်ပါ) ဖြစ်သော သောကြာ ဂြိုဟ်နှင့် ပိုင်ဆိုင်ရာ ရာသီ အိမ်ချင်း ဖလှယ်၍ ရပ်တည် နေကြခြင်း ဖြစ်၏။
ပရိဝတ္တန ယောဂ တို့အား အသေးစိတ် လေ့လာခြင်း။
ဦးစွာ ပထမ- ပရိဝတ္တန ယောဂ အမှတ် (၁) ကိုလေ့လာကြပါစို့။
လဂ်မှ ၇-တန့်ဘာဝ အိမ်ရှင် စနေ နှင့် လဂ်သခင် တနင်္လာဂြိုဟ် ပိုင်ဆိုင်ရာ နေရာချင်း ဖလှယ်နေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ယောဂ ဖြစ်ပါ၏။
ဤယောဂ အနေဖြင့် ကောင်းစွာ အလုပ်လုပ်မည် ဆိုပါက - စနေ နှင့် တနင်္လာတို့ ဒဿာ စားသော ကာလများတွင် ကောင်းကျိုးတို့ကို ထင်ရှားစွာရရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ပထမ ဦးစွာ အင်ဒီရာ ၂-နှစ် မပြည့်မီ ကလေး အရွယ် (နိုဝင်ဘာလ ၁၉၁၉ မှ စက်တင်ဘာလ ၁၉၂၀ အတွင်းကာလ) တွင် ပထမ ပရိဝတ္တန အကျိုးပေး ပေါ်ရမည့် - တနင်္လာ ထူလ ဒဿာနှင့် တနင်္လာ အန္တရ ဒဿာတို့ စားပါသည်။
သူအနေဖြင့်လည်း ဘာမျှ ထင်ရှား နိုင်သော၊ သိတတ်သော အရွယ် မဟုတ်သေးသကဲ့သို့- ဖခင်မှာလည်း မဟတ္တမ ဂန္ဓီကြီးနှင့် ပူးပေါင်းကာ နယ်ချဲ့တို့အား တော်လှန်ရန် နိုင်ငံရေး ဆောင်ရွက် နေသော ကာလ ဖြစ်ပါသည်။ နေရူး သည် ၁၉၂၁ တွင် - နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှု အတွက် ထောင်ဒဏ်ကို ပထမဆုံး ကျခံခဲ့ ရပါသည်။
အင်ဒီရာ ၆-နှစ်ကျော် ကလေး အရွယ် (ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၉၂၄ မှ စက်တင်ဘာ ၁၉၂၅ အကြားကာလ) တွင် ပရိဝတ္တန အမှတ် (၁) အကျိုးပေးပေါ်ရမည့် - တနင်္လာ နှင့် စနေ တို့ ထူလ ဒဿာနှင့် အန္တရ ဒဿာတို့ စားပါသည်။
သူမ ဘ၀တွင် ထင်ရှားသော ကောင်းကျိုး တစ်စုံတစ်ရာ မဖြစ်ခဲ့ပါ။ သို့သော် ဖခင် ဖြစ်သူ နေရူး အနေဖြင့် ၁၉၂၄ တွင် အလာဟာဘတ် မြို့- စည်ပင်သာယာ (ကိုလိုနီ အခေါ် မြူနီစပယ် တွင်) ဥက္ကဌ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၇၀- နိုဝင်ဘာလ မှ ၁၉၇၃-နိုဝင်ဘာလ အတွင်း- အင်ဒီရာ အနေဖြင့် အသက် ၅၂ မှ ၅၃-နှစ် ကျော် အရွယ်တွင် ပရိဝတ္တန အမှတ် (၁) အကျိုးပေးပေါ်ရမည့် - တနင်္လာ နှင့် စနေ တို့ ထူလ ဒဿာနှင့် အန္တရ ဒဿာတို့ စားပြန် ပါသည်။
သို့သော် ထိုကာလ မတိုင်မီ နိုဝင်ဘာလ ၁၉၆၉ တွင် - ပါတီ၏ စည်းကမ်းများကို မလိုက်နာမှု ဖြင့် ထိုအချိန်က ကွန်ဂရက်ပါတီ ဥက္ကဌ ဖြစ်နေသူ အင်ဒီရာအား ကွန်ဂရက် ပါတီမှ ထုတ်ပယ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ အင်ဒီရာသည် ကွန်ဂရက် (အာရ်) Requisition ဆိုသော ပြိုင်ဘက် ပါတီကို တည်ထောင် ခဲ့ခြင်းဖြင့် ကွန်ဂရက် ပါတီကြီး ၂-ပိုင်းကွဲသွားသည်။ မူလ ကွန်ဂရက် ပါတီ ကော်မီတီမှ အဖွဲ့ဝင် ၇၀၅ ဦးမှ ၄၄၆ ဦးသည် အင်ဒီရာ တည်ထောင်သော ကွန်ဂရက် ပါတီ အသစ် နယူး ကွန်ဂရက် ပါတီ သို့ ပြောင်းရွှေ.လာခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် ပရိဝတ္တန အမှတ် (၁) အကျိုးပေးပေါ်ရမည့် ထိုကာလသည် - ၁၉၇၅ မတိုင်မီ အထိ အင်ဒီရာ အနေဖြင့် မိမိ၏ ပါတီသစ် ရပ်တည်နိုင်ရန်- အသည်းအသန် ရုန်းကန် နေရသော ကာလ ဖြစ်သဖြင့် ကောင်းကျိုးများ ပေါ်လွင်သည့် ကာလ ဟု မဆိုနိုင်ပါ။
၁၉၈၁- အောက်တိုဘာလ မှ ၁၉၈၃-မေလ အတွင်း- အင်ဒီရာ အနေဖြင့် အသက် ၆၃-နှစ် ကျော် အရွယ်တွင် ပရိဝတ္တန အမှတ် (၁) အကျိုးပေး ပေါ်ရမည့် - စနေ နှင့် တနင်္လာ တို့ ထူလ ဒဿာနှင့် အန္တရ ဒဿာတို့ စားပြန် ပါသည်။
ထိုကာလ မတိုင်မီ ၁၉၈၀ ဇန်န၀ါရီလ တွင် အင်ဒီရာသည် ၀န်ကြီးချုပ် အဖြစ် ဒုတိယ အကြိမ် ပြန်လည် ရရှိခဲ့သည်။ (ထိုကာလ အတွင်းမဟုတ်ပါ။) သို့သော် ထက်မြက်သော သားငယ်ဖြစ်သူ ဆန်ဂျေးသည် တရားဝင် ၀န်ကြီး မဟုတ်သေးသော်လည်း တန်ခိုးပြကောင်း ခဲ့သဖြင့် - အဆင့်မြင့် ၀န်ကြီးများ၊ ကက်ဘီနက် ၀န်ကြီး များစွာတို့- အင်ဒီရာ အနေဖြင့် မိမိတို့ မပျော်ပိုက်ကြောင်း သိစေရန် ဆန္ဒပြသည့် အနေဖြင့် ရာထူးများမှ နှုတ်ထွက်ခဲ့ကြသည်။ ၁၉၈၀ ဇွန်လ ၂၃-ရက်တွင် လေယာဉ်ပျက်ကျပြီး ဆန်ဂျေး ကွယ်လွန် ခဲ့သည်။
ပထမ ပရိဝတ္တန အကျိုးပေး ပေါ်ရမည့် ၁၉၈၁- အောက်တိုဘာလ မှ ၁၉၈၃-မေလ အတွင်း-သားအတွက် လွမ်းဆွေး စိတ်ဆင်းရဲစရာများ ရှိခဲ့ရသည်မှ အပ- ထူးခြားသော မည်သို့ အောင်မြင်မှုများမှ မရရှိခဲ့ပါ။
ဆက်လက်၍- ပရိဝတ္တန ယောဂ အမှတ် (၂) ကိုလေ့လာကြပါစို့။
၅-တန့်ဘာဝ အိမ်ရှင် အင်္ဂါ နှင့် - ၂-တန့်ဘာဝ အိမ်ရှင် တနင်္ဂနွေ ဂြိုဟ်တို့ ပိုင်ဆိုင်ရာ ရာသီ အိမ်ချင်း ဖလှယ်၍ ရပ်တည် နေကြခြင်း ဖြစ်၏။
သို့ဆိုလျှင်- အင်္ဂါနှင့်- တနင်္ဂနွေ ဆိုင်ရာ ထူလ၊ အန္တရ ဒဿာများတွင် အကျိုးပေးများ ထင်ရှားရမည် ဖြစ်ပါသည်။
တနင်္ဂနွေ ထူလ ဒဿာ အများစု သည်- မမွေးခင်ကပင် လွန်မြောက်ခဲ့ ပြီ ဖြစ်သဖြင့်- တနင်္ဂနွေ ထူလ၊ တနင်္ဂနွေ အန္တရ ဒဿာကို လည်းကောင်း၊ တနင်္ဂနွေ ထူလ၊ အင်္ဂါ အန္တရ ဒဿာကို လည်းကောင်း မဟောပြောနိုင်ပါ။
ထို့ကြောင့် အင်္ဂါ ထူလ၊ အင်္ဂါ အန္တရ ဒဿာ နှင့် အင်္ဂါ ထူလ၊ အင်္ဂါ တနင်္ဂနွေ ဒဿာကိုသာ လေ့လာ ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကာလ သည် နိုဝင်ဘာ ၁၉၂၉ မှ ဧပြီ ၁၉၃၀ အတွင်း ဖြစ်သည်။
ဤကာလများတွင် အင်ဒီရာသည် ကျောင်းသူ အရွယ်သာ ဖြစ်သေးပြီး၊ ဖခင်၏ ဘ၀တွင်လည်း သက်ဆိုင်ရာ ကာလ အတွင်း ထူးခြားသော အောင်မြင်မှုများကို မရရှိခဲ့ပါ။
တစ်ခုတော့ ပြောစရာရှိပါသည်- ၁၉၂၉ အတွင်း (အင်္ဂါ ထူလ၊ အင်္ဂါ အန္တရ ဒဿာ မတိုင်မီ)- တွင်- ဖခင်ဖြစ်သူ နေရူးသည် ကွန်ဂရက် ပါတီ၏ ဥက္ကဌ အဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်း ခံခဲ့ရသဖြင့်- ထိုဒဿာ ကာလ များတွင် ဖခင် အရှိန်အ၀ါ ထင်ရှားသော ကာလ တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။
အင်္ဂါ တနင်္ဂနွေ ဒဿာ စားသော ကာလ ဖြစ်သည့် ၁၉၃၅-ဒီဇင်ဘာလ မှ ၁၉၃၆- ဧပြီလ အတွင်းကို လေ့လာသော အခါ-
၁၉၃၄-၃၅ ခုနှစ် တွင်- အခြေခံပညာ အောင်မြင်ပြီး အိန္ဒိယ စာဆိုတော်ကြီး ရာဘိန္ဒြာ နတ်သ်ဂိုး တည်ထောင်ခဲ့သော ကျောင်း တွင် ဆက်လက် ပညာသင်ကြား ခဲ့သည်။ ထို့နောက် အင်္ဂလန် နိုင်ငံ၊ အောက်စ်ဖို့ဒ် တက္ကသိုလ် ၀င်ခွင့် စာမေးပွဲကို ဖြေဆိုခဲ့သော်လည်း - မအောင်မြင်သဖြင့် ၀င်ခွင့်မရခဲ့။
၁၉၃၇-တွင်မှာ အောက်စ်ဖို့ဒ် တက္ကသိုလ်၊ ဆိုမာဗီလီး ကောလိပ်တွင် ပညာသင်ခွင့်ရခဲ့၏။ ဤကာလ တွင်ပင် နောင်တွင် ခင်ပွန်းဖြစ်လာမည့် ဖာရိုးဇီ ဂန္ဒီနှင့် ဆုံတွေ့ခဲ့၏။
ပရိဝတ္တန သီအိုရီ အရဆိုလျှင်- ကောင်းသော အကျိုးပေးရမည့် ကာလဖြစ်သည့် အင်္ဂါ ထူလ၊ တနင်္ဂနွေ အန္တရ ကာလတွင် ကျောင်းဝင်ခွင့်ပင် မရခဲ့ရသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
ဆက်လက်၍- ပရိဝတ္တန ယောဂ အမှတ် (၃) ကိုလေ့လာကြပါစို့။
၆-တန့်ဘာဝ အိမ်ရှင် ကြာသပတေး နှင့် - ၁၁-တန့်ဘာဝ အိမ်ရှင် သောကြာ ဂြိုဟ်တို့ ပိုင်ဆိုင်ရာ ရာသီ အိမ်ချင်း ဖလှယ်၍ ရပ်တည် နေကြသော ယောဂ ဖြစ်သဖြင့်- ဤယောဂ၏ အကျိုးသည် ကြာသပတေးနှင့် သောကြာတို့ ထူလ ဒဿာ၊ အန္တရ ဒဿာ ကာလ တို့တွင် အကျိုးပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။
သောကြာ ထူလ တိုင်အောင် အသက် ၉၅ နှစ် အထိ မရှည်ခဲ့သဖြင့်- ကြာသပတေး ထူလကိုသာ လေ့လာခွင့်ရပါသည်။
ပထမဦးစွာ- ကြာသပတေး ထူလ၊ ကြာသပတေး အန္တရ ကာလ ဖြစ်သည့် ၁၉၅၄- နိုဝင်ဘာမှ ၁၉၅၇-ဇန်န၀ါရီ ကာလ အတွင်းတွင်- အဆိုးအကောင်း၊ ထူးခြားသော၊ ထင်ရှားသော ဖြစ်ရပ်များ မဖြစ်ခဲ့ပါ။
ဆက်လက်၍- ကြာသပတေး ထူလ၊ သောကြာ အန္တရ ကာလ ဖြစ်သည့် ၁၉၆၂- စက်တင်ဘာလ မှ ၁၉၆၅-မေလ ကာလ အတွင်းတွင်- ထင်ရှားသော အခြေအနေ မဖြစ်ခဲ့ပဲ- ထိုကာလ လွန်မြောက်ပြီး- ၁၉၆၆-ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၁၉-ရက်တွင် မှ အိန္ဒိယ နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး အမျိုးသမီး ၀န်ကြီးချုပ် အဖြစ်ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။
မိုးတား MOTAA နည်းစနစ်ဖြင့် လေ့လာခြင်း။
ဤဇာတာ အနေအထားအရ- အင်ဒီရာ ဂန္ဓီသည် လဂ် သည် အသိလိဿ နက္ခတ်ကို စီးနင်းလျှက်- စန်းခေါ် တနင်္လာဂြိုဟ်သည် ဥတ္တရာသဠ် နက္ခတ်နှင့် ယှဉ်၍ မွေးဖွားလာခဲ့သည်။
ဂြိုဟ်တစ်လုံးချင်း စစ်ဆေးခြင်းကို မဖေါ်ပြတော့ပဲ- အရေးပါသော ထူးခြားသည့် အချက်များ ကိုသာ ဆန်းစစ်ပြပါမည်။
MOTAA အင်အား တိုင်းတာနည်းများအရ- စစ်ဆေးလိုက်ပါက- ဤဇာတာတွင် အင်အား အကြီးမားဆုံး ဂြိုဟ်မှာ ၁၀-တန့်သခင် (မူလ တြိဂေါဏ အိမ်ရှင်) ဖြစ်သော အင်္ဂါ ဖြစ်၍- အင်အား အနည်ဆုံးဂြိုဟ်မှာ လဂ်သခင်- စန်းခေါ် တနင်္လာဂြိုဟ်ဖြစ်နေသည်။
တနင်္လာသည် လဂ်သခင် ဖြစ်၍- ဇာတာရှင်၏ ကိုယ်ကာယ အခြေအနေကို ဖေါ်ပြသည်သာ- စိတ်ကို အစိုးရသော ဂြိုဟ်လည်း ဖြစ်သည်။
တနင်္လာသည်- သူ့ကို ရန်ပြုသော စနေပိုင်ဆိုင်ရာ မကာရ ရာသီတွင်တည်၍- တစ်နည်းအားဖြင့်လည်း- ဘာဝ အားဖြင့် ၆-တန့်ဘာဝခေါ် ရန်သူနှင့် ဆိုင်သော ဘာဝတွင် တည်သည်။
၆-တန့်ဘာဝသည် အပြိုင်အဆိုင်စိတ်ဓါတ်၊ မည်သူ့နှင့်မျှ မတူအောင် ပြုလိုသော စိတ်ဓါတ်၊ အတိုက်အခံ စိတ်ဓါတ်ကို ဖေါ်ဆောင်သော ဘာဝ လည်း ဖြစ်သဖြင့်- ဇာတာရှင် အနေဖြင့် မည်သည့် အလုပ်လုပ် - တွန်းတွန်း တိုက်တိုက် လုပ်လိုသော- အညံ့မခံလိုသော စိတ်ဓါတ် ရှိနေသည်။ သူများတွေထက် ပိုကောင်းလုပ်မည် ဆိုသော စိတ်ဓါတ်ကြောင့် အများတကာနှင့် အမြဲတမ်း ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ရသော သူမျိုးဖြစ်သည်။
ထိုစိတ်ဓါတ်တို့ကြောင့်လည်း - ကွန်ဂရက်ပါတီ ဥက္ကဌ ဖြစ်နေသူ အင်ဒီရာအား မိခင် ကွန်ဂရက် ပါတီမှ ထုတ်ပယ်ခြင်း ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
တစ်ဖန် - ထိုစိတ်ဓါတ် တို့ကြောင့်လည်း- ပန်ဂျပ်ပြည် ရွှေကျောင်းကိစ္စတွင် အစွန်းရောက် အကြမ်းဘက် ဆစ်ခ်လူမျိုး များအား အိန္ဒိယ စစ်တပ်မှ- ပစ်ခတ် စေခဲ့သဖြင့် တရားဝင် စာရင်းများအရ- လူပေါင်း ၄၉၂- တရားမ၀င် စာရင်းများအရ လူပေါင်း ၁၅၀၀ အထိ သေဆုံးခဲ့ရသော သမိုင်းဝင် Operation Blue Star ဖြစ်ရပ် ကြီး ပေါ်ပေါက် ခဲ့ရခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ အင်ဒီရာ အနေဖြင့် လုပ်ကြံခံရ၍ သေဆုံးပြီးနောက်ပိုင်း လူမျိုးရေး အထိကရုဏ်းများကြောင့် နောက်ထပ် လူပေါင်း ၅၀၀ ခန့် ဆက်လက်သေဆုံးခဲ့ရသေးသည်။
လဂ်သခင် ဖြစ်သော တနင်္လာကိုယ်တိုင် အားနည်းနေမှု၊ အသက် ရှည်မှု ကို ကာရကပြုသော စနေဂြိုဟ် အင်အား နည်းပါးနေမှု၊ လဂ် (၁-တန့်ဘာဝ) ကိုယ်တိုင်လည်း အားနည်းနေမှု၊ ရှင်သန်မှု အင်အားဖြစ်သည့် ၃-တန့်ဘာဝ အင်အား နည်းပါးနေမှုတို့ကိုတွေ့ရသည်။ ထိုအခြေအနေများသည်- သက်တမ်းပြည့် နေထိုင် နိုင်ရေး အတွက် အထောက်အကူ မပြုသော အခြေအနေများ ဖြစ်နေ၏။
ဘ၀ ကံကြမ္မာ အနိမ့်အမြင့်မှာ-
ပရိဝတ္တန ယောဂကို အမှီမပြုပဲ- သက်ဆိုင်ရာ ဒဿာဂြိုဟ်တို့ အင်အားကောင်းသော ကာလတွင် အကောင်းဆုံး အကျိုးပေးမည် ဆိုသော မူကို မိုးတားမှ အသုံးပြု၏။
21/5/1965 မှ- 9/3/1966 အတွင်း ကြာသပတေး ထူလ- တနင်္ဂနွေ အန္တရ ဒဿာ စားနေ၏။ ကြာသပတေး သည် မူလ အင်အားရှိသည့် အပြင် ကာရက ဂြိုဟ်ကောင်း ဖြစ်သော- ၃-တန့်သခင် ဗုဒ္ဓဟူး ၏ လွှမ်းမိုးမှု အထောက်အကူကို ကောင်းစွာ ရထား၏။ ပုံတွင် အစိမ်းရောင် ဖြင့် ဖေါ်ပြထားသည်မှာ ကာရက ဂြိုဟ်ကောင်း၏ ထောက်ပံ့မှု ပမာဏ အင်အားဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် တနင်္ဂနွေသည်လည်း- အင်အား ရှိသော ဂြိုဟ်အနေအထားတွင် ရှိ၏။ ထို့ကြောင့် ထိုကာလတွင်း ဖြစ်သော ၁၉-ဇန်န၀ါရီ-၁၉၆၆ တွင် ၀န်ကြီးချုပ် တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။
၁၅-ဇွန်လ-၁၉၆၈ မှ ၉-နိုဝင်ဘာ ၁၉၇၀ အတွင်း သည် ကြာသပတေး ထူလ၊ ရာဟု အန္တရ ဒဿာ ကာလ ဖြစ်သည်။ အန္တရ ဒဿာ သည် ပို၍ အရေးပါသော အနေအထား ဖြစ်သောကြောင့်- ကာရက ပါပဂြိုဟ်ဖြစ်သော ရာဟု ဒဿာ ကာလ အတွင်းတွင် ကံကြမ္မာ နိမ့်ကျနေကာ- ကွန်ဂရက် ပါတီမှပင် ထုတ်ပယ် ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
၂၁-၇-၁၉၇၆ မှ ၃၀-၈-၁၉၇၇ ကာလ အတွင်းတွင်- စနေ ထူလ၊ ကိတ် အန္တရ ဒဿာ စားနေ၏။ တိုင်းပြည်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော အခြေအနေ များကြောင့် ၁၉၇၇ အထိ နိုင်ငံတော် အရေးပေါ် အခြေအနေကို ကြေညာခဲ့ရသည်ကို မြင်နိုင်ပါသည်။
၁၇-၁၁-၁၉၈၀ မှ ၁၂-၁၀-၁၉၈၁ ကာလ အတွင်းသည် စနေထူလ၊ တနင်္ဂနွေ အန္တရ ဒဿာ ကာလ ဖြစ်ပြီး၊ ထိုကာလ အတွင်းတွင် ၀န်ကြီးချုပ် အဖြစ် ဒုတိယ အကြိမ် ရွေးမြောက် ခြင်းခံခဲ့ရသော ကာလ ဖြစ်သော်လည်း- ကံကြမ္မာ အနိမ့်အမြင့် အဆိုးအကောင်းများ ဒွန်တွဲနေခဲ့သည်။
အဆိုးဆုံးဖြစ်သော ကာလ ဖြစ်သည့် စနေ ထူလ၊ ရာဟု အန္တရ ဒဿာ ကာလ အတွင်းတွင် - မရဏ သေခြင်းတရား၏ တာဝန်ကို ယူဆောင်သည့် ၈-တန့် ဘာဝ သခင်၊ မထင်မှတ်သော ဖြစ်ရပ်များကို ဖြစ်စေသည့် ရာဟုတို့က- မိမိ၏ ကိုယ်ရံတော် တို့ကပင် မိမိအား လုပ်ကြံစေသည် အထိ ဖြစ်လာစေရန် ပို့ဆောင် ပေးလိုက်ပါတော့သည်။ အသေးစိတ် သုံးသပ်ချက်ကို အောက်တွင် ဆက်လက်လေ့လာပါ။
လုပ်ကြံခြင်း ခံရချိန် ဒဿာ
အင်ဒီရာ ဂန္ဒီအား သူမ၏ ဆစ်ခ် လူမျိုး ကိုယ်ရံတော် နှစ်ဦးမှ သူမအား ပူးပေါင်းလုပ်ကြံခြင်း ခံရချိန် ၁၉၈၄-ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၃၁-ရက်တွင် စနေ ထူလ၊ ရာဟု အန္တရ ဒဿာ၊ ရာဟု ပြတန္တရ ဒဿာ စားနေ၏။
သူမ၏ ကိုယ်ခန္ဓာတွင် ကျည်ဆံဝင်ရောက် ထိုးဖေါက်သွားသော နေရာ ၁၉- နေရာုရှိ၍၊ ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှ ကျည်ဆံ ၁၆ တောင့်ကို ခွဲထုတ်ရရှိခဲ့သည်။
ထိုသို့ သက်တော်စောင့် ကိုယ်ရံတော်တို့ ကိုယ်တိုင်မှ ဇာတာရှင်ကို လုပ်ကြံခြင်း ကို ဖြစ်စေခဲ့သည့် ပန်ဂျပ်ပြည်၊ ရွှေကျောင်း အရေး အခင်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့် ကာလမှာကား ၁၉၈၄-ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၆-ရက်နေ့ ဖြစ်၍။ ထိုအချိန်က သူမ အနေဖြင့် စနေ ထူလ၊ အင်္ဂါ အန္တရ ဒဿာ စားနေခဲု့၏။
စနေဂြိုဟ်သည် သူမ အတွက် မရဏဘာဝ ခေါ် ၈-တန့်ဘာဝ၏ သခင် (မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင်) ဖြစ်၍- မူလ ဇာတာတွင် အင်အားနည်းသော ဂြိုဟ်ဖြစ်သည်။
အင်္ဂါသည် - လုပ်ရဲ ကိုင်ရဲ - ဆောင်ရွက်ရသည့် ဂြိုဟ်ဖြစ်သည်သာမက- ၂-တန့်ဘာဝတွင် ရပ်တည်သော ၁၀-တန့်သခင် ဂြိုဟ်လည်း ဖြစ်၏။
၂-တန့်သည် ဂုဏ်သိက္ခာ၊ အဆင့်အတန်း တို့ကို ပြဆို၍ ၁၀-တန့်သည် ဇာတာရှင်၏ အလုပ်အကိုင် Career ကိုလည်းကောင်း၊ Public Image ကိုလည်းကောင်း ပြဆိုသော ဘာဝ ဖြစ်၏။
ထို အင်္ဂါ၊ တနည်းအားဖြင့် ပြတ်သား ရက်စက်စွာ ဆောင်ရွက်ရသော၊ အများပြည်သူ နှင့် ဆိုင်သော၊ မိမိ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ အလုပ်နှင့် သက်ဆိုင်သော အင်္ဂါသည် ဇာတာရှင် အနေဖြင့် အင်အား ကောင်းသော ဂြိုဟ် တစ်ခု ဖြစ်ကာ- 17/5/1984 မှ 21/6/1984 အတွင်း ဒဿာ စားနေခြင်း ဖြင့် ထိုကာလတွင် အများနှင့် ဆိုင်သော ပြတ်သားသော လုပ်ဆောင်မှု တစ်ခုကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါ၏။
သို့သော်- ထိုကာလ လွန်မြောက်ခဲ့ပြီးနောက်- 21/6/1984 မှ 25/11/1984 အတွင်း သို့ ရောက်သော အခါတွင်ကား-
၈-တန့်ဘာဝ၏ သခင် စနေ၏ ထူလ ဒဿာ၊ မထင်မှတ်သော ဖြစ်ရပ်များကို ဖြစ်စေသည့် ဂြိုဟ်ဆိုး ဖြစ်သော ရာဟု၏ အန္တရ ဒဿာ၊ ထိုရာဟု ပြတန္တရ ဒဿာ သို့ရောက်သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
ကောဇာ ရှုထောင့်မှ လေ့လာကြည့်မည် ဆိုလျှင်-
ကောဇာ ရာဟုနှင့် ကိတ်တို့သည် မူလ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်အား အံသာ အတိအကျ နီးပါးဖြင့် လွှမ်းမိုးဖျက်ဆီးလိုက်၏။ မူလကတည်းက လွန်စွာ အားနည်းသော တနင်္လာဂြိုဟ်အား ကောဇာ ရာဟု သည် ၉-တန့် အမြင်ဖြင့် ဆက်လက် ဖျက်ဆီးလိုက်ပြန်၏။
တစ်ဆက်တည်းမှာပင်- မရဏ ဘာဝ ခေါ် ၈-တန့် သခင် ကောဇာ စနေ သည် မူလ သောကြာ အား ၃-တန့် အမြင်နှင့် ၈၁% နှင့် လည်းကောင်း၊ မူလ စနေ ကို ၁၀-တန့် အမြင် ၈၉% ဖြင့်လည်းကောင်း ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပြန်သည်။
မရဏ ဘာဝ သခင် ကောဇာ စနေသည် - ထိုမျှ မကသေး ၁-၄-၆-၁၀ အတန့်များကို ဆက်လက် ဖျက်ဆီးထားပြန်သေးသည်။ ဘာဝတို့၏ အလယ်မှတ်များသည် ၂၇း၂၂ ဖြစ်၍- ကောဇာ စနေ၏ ရပ်တည်ချက်သည် ၂၄း၀၆ ဖြစ်သဖြင့်- ၄င်းမှ အပူး၊ အမြင်တို့ဖြင့် အရေးပါသော ဘာဝများကို ဖျက်ဆီး ထားခြင်းကို မြင်နိုင်ပါ၏။
အထူးသဖြင့် ကိုယ်ကာယ ၁-တန့်နှင့်၊ ရန်သူ၏ အတိုက်အခိုက် ခံရခြင်း နှင့် ဆိုင်သော ၆-တန့်ဘာဝ များ ထိခိုက် ပျက်စီးသွားခြင်း သည်- ဥပစ္ဆေဒက ဖြင့် သေဆုံးခြင်း၏ သင်္ကေတ တစ်ခုပင် ဖြစ်ပါတော့သည်။
ပရိဝတ္တန ယောဂ အမှတ် (၁) အကျိုးပေးခွင့် မရခြင်း အကြောင်း-
ပရိဝတ္တန ယောဂ အမှတ် (၁) အနေဖြင့် အကျိုးပေးရမည့် ကာလ ဖြစ်သော- တနင်္လာ ထူလ၊ စနေ အန္တရ ဒဿာ ကာလတွင် လည်းကောင်း (အသက် ၆-နှစ်ကျော် အရွယ်)၊ နှင့် စနေ ထူလ၊ တနင်္လာ အန္တရ ဒဿာ ကာလ (အသက် ၅၂ မှ ၅၃-နှစ် ကျော် အရွယ်) တွင် လည်းကောင်း- အကျိုးပေးခွင့် မသာခဲ့ရသည့် အနေအထားမှာ- အင်အား အနေအထား အားဖြင့် အနှုတ် တန်ဘိုးပြနေသည့် တနင်္လာကြောင့် အဓိက ဖြစ်၏။
တစ်ဖန်- စနေသည် ၇-တန့် အိမ်ရှင်၊ တစ်နည်းအားဖြင့် ကိန်းအိမ်ရှင် ဆိုငြားသော်လည်း- အမှန်အားဖြင့် ၈-တန့်ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင်၊ (သခင်) ဖြစ်နေ၏။
ဤအချက်တို့ကြောင့် ပရိဝတ္တန ယောဂ အမှတ် (၁) သည် သက်ဆိုင်ရာ ဂြိုဟ်တို့၏ ဒဿာတွင် အကျိုးပေးခွင့် မရခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။
ပရိဝတ္တန ယောဂ အမှတ် (၂) အကျိုးပေးခွင့် မရခြင်း အကြောင်း-
ပရိဝတ္တန ယောဂ အမှတ် (၂) သည် အင်္ဂါနှင့်- တနင်္ဂနွေ တို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ယောဂ ဖြစ်သည်။ ထိုဂြိုဟ် ၂-လုံးတို့သည် အတိုင်းအတာ တစ်ခုအားဖြင့် အင်အား ရှိသော်လည်း- ကြာသပတေး နှင့် ဗုဒ္ဓဟူး တို့ကဲ့ အထောက်အကူ အင်အားများ မရထားပါ။ ထို့ကြောင့် ထိုကာလ တို့သည်လည်း ထင်ရှားသော အကျိုး မရခဲ့သော ကာလ များ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
ပရိဝတ္တန ယောဂ အမှတ် (၃) အကျိုးပေးခွင့် မရခြင်း အကြောင်း-
ပရိဝတ္တန ယောဂ အမှတ် (၃) သည် ၆-တန့်ဘာဝ အိမ်ရှင် ကြာသပတေး နှင့် - ၁၁-တန့်ဘာဝ အိမ်ရှင် သောကြာ ဂြိုဟ်တို့ ပိုင်ဆိုင်ရာ ရာသီ အိမ်ချင်း ဖလှယ်၍ ရပ်တည် နေကြသောကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ယောဂ ဖြစ်သည်။ ကြာသပတေး အနေဖြင့် အင်အား ရှိထားပြီး- ဂြိုဟ်ကောင်း၏ ထောက်ပံ့မှုကို ရထားသော်လည်း သောကြာ အနေဖြင့် အင်အား နည်းနေသော ကြောင့် ထိုကာလ အများအတွင်း ထူးခြားသော၊ ကောင်းခြင်း ဆိုးခြင်းတို့ မဖြစ်ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။
ပရိဝတ္တန ယောဂ သည် ယေဘူယျ အားဖြင့် အဆိုးများ ပတ်သက်မှု မရှိလျှင် ကောင်းမြတ်သော ယောဂ အမျိုးအစား ဖြစ်ပါ၏။ သို့သော်- ကောင်းမြတ်သော ယောဂ တို့ အကျိုးပေး နိုင်ချိန်တို့တွင် သက်ဆိုင်ရာ ဂြိုဟ်များသည် အင်အား ပျက်နေပါလျှင် ထိုယောဂ၏ အကျိုးကို ရသင့်သလောက် မရနိုင်ပါပေ။ ထိုနည်းတူ ဆိုးသော ယောဂများ ပါရှိသူများ အနေဖြင့်လည်း- ထိုယောဂ တွင် ပါဝင်သော သက်ဆိုင်ရာ ဂြိုဟ်တို့သည် ကာရက ဂြိုဟ်ဆိုးများ ဖြစ်နေခြင်း၊ အင်အား ချိနည့် ပျက်စီးနေခြင်း ဖြစ်နေပါမှ ထိုဆိုးကျိုးတို့သည် ထင်ရှားမည် ဖြစ်သည်ကို ဗေဒင် ပညာရှင်၊ ၀ါသနာရှင်၊ လေ့လာ သူများ သတိချပ်သင့် ကြပါသည်။
Labels: အင်ဒီရာ ဂန္ဒီ၊ ပရိဝတ္တန ယောဂ၊ မိုးတား နက္ခတ္တ
ယုဂ်တစ်ခုဖေါ်ဆောင်ဖို့ မူလအားအရေးကြီးကြောင်း မှတ်သားမိပါပြီဆရာ။ ယုဂ်ကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ရာမှာ ဂြိုဟ်တို့၏ ပရိယာယ်အချင်းချင်း ယှဉ်ထိုးဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ ရပ်ရာအတန့်ပရိယာယ်အရ ယှဉ်ထိုးဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ တာဝန်ယူရာ အတန့်သခင်များ ပရိယာယ်အရ ယှဉ်ထိုးဆုံးဖြတ်ခြင်း တို့ရှိရာမှာ ဘယ်ဆုံးဖြတ်မှုကို ပိုမိုအလေးထားရပါမလဲဆရာ၊ MOTAA အားများဟာ တွက်စဉ်မှာတော့ ရာသီဘာဝ အားလုံးပါဝင်သုံးသပ်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျ။ ပရိယာယ်ပိုင်းက အလေးပေးမှုကို လေ့လာပါရစေဆရာခင်ဗျား။
ကိုပခန်းရေ.. ယုဂ် ဆိုတာဟာ.. အမှန်အားဖြင့် ဂြိုဟ်ပရိယာယ်နဲ့ ဘာဝ ပိုင်ရှင် ပရိယာယ်တွေကို ပေါင်းစု ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ဟောချက်များ ဖြစ်တဲ့ အတွက်- အဓိက အားဖြင့် မိုးတားသင်ခန်းစာတွေမှာ ပါတဲ့ အတိုင်း- မူလ တာဝန်နဲ့ ကာရက တာဝန်ကို အလေးပေးရပါမယ်။ ရာသီ တွေအတွက်က- ဥုစ်၊နိစ်၊ မိတ်၊ရန် စသည်တို့ဟာ.. ရာသီသဘော၊ ဓါတ်ကြီးတွေသဘောတွေ ပါပြီး ဖြစ်လို့.. မိုးတားအားတွေ အနေနဲ့ ရာသီ တွေအတွက်က ပါဝင်ပြီး ဖြစ်နေပါပြီ။ နျူမာန် (မိုးတား)